China Nasopharyngeal Swab abavelisi kunye nabanikezeli | J.able
Inombolo yoMfanekiso: NFS-TB(150X8LMZ22ZR)
Ingcebiso yeNyiloni eQhliweyo;
80mm indawo yokuqhawula;
Igama leMveliso: I-Swab yokuQokelelwa koMfanekiso oLahliweyo
ITip Material: Inayiloni Flocked Fiber
Intonga yentonga: ABS
Isicelo: Isampuli yeempumlo
Ukuqokelelwa kwesampulu ephezulu kunye ne-elution ye-DNase kunye ne-RNase simahla kwaye ayiqulathanga i-PCR-inhibitory agents.
I-Irradiation Sterilization, nganye nganye ipakishwe kwisingxobo sephepha
Qinisa ikhava yombhobho kwaye ubonise ulwazi lokuqokelela
Akukho zichaso ezichanekileyo zokuqokelela imizekelo nge-nasopharyngeal swabs. Nangona kunjalo, oogqirha kufuneka balumke ukuba isigulana sinokwenzakala okanye utyando lwamva nje, sine-septum yempumlo etenxe ngokuphawulekayo, okanye sinembali yokuvaleka kwemibhobho yeempumlo okanye i-coagulopathy enzima.
Cela isigulana ukuba sikhulule imaski kwaye sivuthele impumlo yakhe kwithishu ukucima ukukhutshwa okugqithisileyo kwimihlaba yeempumlo. Susa i-swab kwi-package. Nyakazisa intloko yesigulane ngasemva kancinane, ukuze iimpumlo zifikeleleke ngakumbi. Cela isigulana ukuba sivale amehlo aso ukunciphisa ukungakhululeki okungephi kwenkqubo. Faka ngobunono i-swab ecaleni kwe-septum yempumlo, ngaphezu komgangatho wepaseji yeempumlo, ukuya kwi-nasopharynx, de kube ukuchasana kuvakala.
I-swab kufuneka ifikelele kubunzulu obulingana nomgama ukusuka kwiimpumlo ukuya kwindawo engaphandle yendlebe. I-CDC icebisa ukushiya i-swab kwindawo imizuzwana emininzi ukuze ifunxe iimfihlo kwaye emva koko isuse ngokucothayo i-swab ngelixa uyijikeleza. Iziko lakho linokucebisa ukuba ujikelezise iswab kwindawo amatyeli aliqela phambi kokuba uyisuse. Cela isigulana ukuba siphinde sisithambise imaski yaso.
Ngaphambili: Sinusitis Sponge Swab for abadala
Okulandelayo: ISampuli yoMlomo yoMlomo weSampulu kwiTubhu
Isampulu yeeSampulu zeempumlo kwi-Tube
Umqala iSampulu Swab
Ikhithi yeMidiya yoThutho lweNtsholongwane, Iityhubhu ze-Falcon Centrifuge 15ml, Iityhubhu zeMicrocentrifuge eziNdlongo, I-Nasopharyngeal Swab yabantwana, Buccal Swab Collection Kit, Imibhobho yeCentrifuge eZimeleyo,